စိတ်ကျရောဂါဝင်နေပြီမှန်း သိနိုင်တဲ့အချက် ၁၀ ချက်
22 Dec 2017 . 6:21 PM
လူတိုင်းရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေဆိုတာကတော့ အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုရှိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မျှော်လင့်ချက်မဲ့လာသလို၊ စိတ်ပျက်လာတာမျိုးတွေ ဘယ်လိုဖြေဖျောက်ဖျောက် ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ စိတ်ကျနေတာသေချာပါပြီ။ စိတ်ဓါတ်ကျနေပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပျက်ယွင်းလာပြီး ဘဝမှာ အရင်လိုနေမပျော်တော့တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အဆုံးစီရင်မိတဲ့အထိ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာမို့ စိတ်ကျခြင်းရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သိရှိထားမှသာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေပြင်ဆင်နိုင်ပြီး လူကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဘဝကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မှာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်ကျရောဂါဝင်နေပြီလား သိနိုင်ဖို့ အောက်ကဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ ကိုယ်လတ်တလောကြုံတွေ့နေရတာတွေ တိုက်ဆိုင်မဆိုင် တိုက်ကြည့်ကြရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) အကူအညီမဲ့နေသလို မျှော်လင့်ချက်မဲ့လာသလို ခံစားရလာပါတယ်။
ဘယ်အရာကမှ ပြန်အဆင်ပြေသွားတော့မှာ မဟုတ်သလိုလို ၊ ကိုယ့်အခြေနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ နည်းလမ်းမရှိတော့သလို ခံစားချက်တွေ ခံစားလာရတာမျိုးပါ။
(၂) နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာပါမယ်။
ကိုယ့်ဝါသနာတွေ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေ၊ ယုတ်စွအဆုံး လိင်မှုကိစ္စမှာပါ စိတ်ဝင်စားစိတ်မရှိတော့တာမျိုးပါ။ ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ ၊ ကြည်နူးဖို့စွမ်းအင်တွေပါ ကုန်ဆုံးသွားတာပါ။
(၃) အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းလာမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျလာမယ်။
သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်တွေကျလာရာကနေ တစ်လတစ်လကို ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ ပျမ်းမျှ 0.5 % ထိ ကျလာတာမျိုးပါ။
(၄) အိပ်ချိန်တွေ ပြောင်းလာမယ်။
အိပ်မပျော်တာတွေ အထူးသဖြင့် မနက်အစောကြီးနိုးနေတာမျိုးတွေ ၊ အလွန်အကျွံအိပ်နေတာမျိုးတွေ၊ ညနက်ထိ အိပ်မပျော်တာတွေက အဓိကပါပဲ။
(၅) ဒေါသတွေထွက်လာမယ်။ သည်းခံနိုင်စိတ်တွေ လျော့နည်းလာမယ်။
အကြောင်းကိစ္စသေးသေးလေးနဲ့လည်း သည်းမခံနိုင်တာမျိုး၊ ရှုးရှုးရှုားရှုားဒေါသထွက်လာတာမျိုး၊ တစ်ခုခုဆို ပေါက်ကွဲလွယ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းကိစ္စတိုင်း၊ လူတိုင်းက ကိုယ့်ကို စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်လာစေတာမျိုးတွေပါ။
ဘာမှ ပင်ပင်ပန်းပန်းမလုပ်ဆောင်ရသေးဘဲလည်း မောပန်းနွမ်းလျလာမယ်။ ပင်ပန်းလာမယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးလေးလံထိုင်းမှိုင်းလာသလို၊ အလုပ်သေးသေးလေးကအစ ပြီးဆုံးဖို့ အရမ်းကြာမြင့်နေတာမျိုးပါ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတော့ဘဲ အပြစ်ရှိနေသလို စိတ်မလုံခြုံဖြစ်နေတာမျိုးပါ။ ဘဝမှာ ဖြစ်ခဲ့သမျှအမှားတွေအတွက် ကိုယ့်မှာပဲ အပြစ်ရှိနေသလို ကြီးကြီးမားမား စိတ်ဖိဆီးလာတာမျိုးပါ။
ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေက ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိဘဲ မိုက်ရူးရဲဆန်လာခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အန္တရာယ်များတဲ့ ဂိမ်းတွေ ကစားတာမျိုး၊ အရှိန်ပြင်းပြင်း ကားမောင်းတာမျိုး၊ လောင်းကစားတစ်ခုခုကိုစွဲမြဲနေအောင်လောင်းတာမျိုးတွေ လုပ်မိနေတာကို ဆိုလိုတာပါ။
အာရုံစူးစိုက်မှုတွေ ဝေဝါးလာခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ မပြတ်သားတော့ခြင်း၊ မှတ်မိနိုင်စွမ်းတွေ လျော့ကျလာခြင်းတွေပါ။
(၁၀) ဖော်ပြလို့မရတဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေ
ခေါင်းကိုက်တာတွေ၊ ကျောအောင့်တာတွေ၊ ကြွက်သားတွေနာကျင်တာတွေ၊ အစာအိမ်က အောင့်လာနာလာတာမျိုးတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေပါ။
HuaweiHUAWEI nova 2i အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိရန်
ဒီ ၁၀ ချက်နဲ့ ကိုယ့်အခြေအနေကကိုက်ညီနေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မှာ စိတ်ကျရောဂါဝင်ရောက်နေပါပြီ။ တစ်စထက်တစ်စပိုမိုဆိုးရွားမလာစေဖို့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရင်ဖွင့်ပြီး ကုသမှုကို ထိထိရောက်ရောက်ခံယူသင့်ပါတယ်။ ဘဝမှာ နေပျော်စေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို စဉ်းစားပြီး အကောင်းမြင်စိတ်ကို တဖြည်းဖြည်းပိုမိုမြှင့်တင်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ စိတ်ရောကိုယ်ရောကျန်းမာတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှင်သန်သွားနိုင်မှာပါ။
စိတျကရြောဂါဝငျနပွေီမှနျး သိနိုငျတဲ့အခကျြ ၁၀ ခကျြ
လူတိုငျးရဲ့ နစေ့ဉျဘဝမှာ စိတျညဈစရာတှဆေိုတာကတော့ အနညျးနဲ့အမြားဆိုသလိုရှိကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့လာသလို၊ စိတျပကျြလာတာမြိုးတှေ ဘယျလိုဖွဖြေောကျဖြောကျ ခံစားနရေပွီဆိုရငျတော့ စိတျကနြတောသခြောပါပွီ။ စိတျဓါတျကနြပွေီဆိုတာနဲ့ ကိုယျ့နစေ့ဉျလုပျငနျးဆောငျတာတှေ ပကျြယှငျးလာပွီး ဘဝမှာ အရငျလိုနမေပြျောတော့တာမြိုးတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။ နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ အဆုံးစီရငျမိတဲ့အထိ မလိုလားအပျတဲ့ ဆိုးကြိုးတှဖွေဈလာနိုငျတာမို့ စိတျကခြွငျးရဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေို သိရှိထားမှသာ ဆောငျရနျရှောငျရနျတှပွေငျဆငျနိုငျပွီး လူကောငျးတဈယောကျအဖွဈ ဘဝကိုပွနျလညျထူထောငျနိုငျမှာပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ စိတျကရြောဂါဝငျနပွေီလား သိနိုငျဖို့ အောကျကဖျောပွထားတဲ့အခကျြတှနေဲ့ ကိုယျလတျတလောကွုံတှနေ့ရေတာတှေ တိုကျဆိုငျမဆိုငျ တိုကျကွညျ့ကွရနျ တငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) အကူအညီမဲ့နသေလို မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့လာသလို ခံစားရလာပါတယျ။
ဘယျအရာကမှ ပွနျအဆငျပွသှေားတော့မှာ မဟုတျသလိုလို ၊ ကိုယျ့အခွနေပွေနျလညျကောငျးမှနျလာဖို့ နညျးလမျးမရှိတော့သလို ခံစားခကျြတှေ ခံစားလာရတာမြိုးပါ။
(၂) နစေ့ဉျလုပျငနျးဆောငျတာတှမှော စိတျဝငျစားမှု လြော့နညျးလာပါမယျ။
ကိုယျ့ဝါသနာတှေ၊ လူမှုရေးကိစ်စတှေ၊ ယုတျစှအဆုံး လိငျမှုကိစ်စမှာပါ စိတျဝငျစားစိတျမရှိတော့တာမြိုးပါ။ ဘဝမှာ ပြျောရှငျဖို့ ၊ ကွညျနူးဖို့စှမျးအငျတှပေါ ကုနျဆုံးသှားတာပါ။
(၃) အစာစားခငျြစိတျလြော့နညျးလာမယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျကလြာမယျ။
သိသိသာသာကိုယျအလေးခြိနျတှကေလြာရာကနေ တဈလတဈလကို ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျရဲ့ ပမျြးမြှ 0.5 % ထိ ကလြာတာမြိုးပါ။
(၄) အိပျခြိနျတှေ ပွောငျးလာမယျ။
အိပျမပြျောတာတှေ အထူးသဖွငျ့ မနကျအစောကွီးနိုးနတောမြိုးတှေ ၊ အလှနျအကြှံအိပျနတောမြိုးတှေ၊ ညနကျထိ အိပျမပြျောတာတှကေ အဓိကပါပဲ။
(၅) ဒေါသတှထှေကျလာမယျ။ သညျးခံနိုငျစိတျတှေ လြော့နညျးလာမယျ။
အကွောငျးကိစ်စသေးသေးလေးနဲ့လညျး သညျးမခံနိုငျတာမြိုး၊ ရှုးရှုးရှုားရှုားဒေါသထှကျလာတာမြိုး၊ တဈခုခုဆို ပေါကျကှဲလှယျတာမြိုးတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။ အကွောငျးကိစ်စတိုငျး၊ လူတိုငျးက ကိုယျ့ကို စိတျအနှောငျ့ယှကျဖွဈလာစတောမြိုးတှပေါ။
ဘာမှ ပငျပငျပနျးပနျးမလုပျဆောငျရသေးဘဲလညျး မောပနျးနှမျးလလြာမယျ။ ပငျပနျးလာမယျ။ တဈကိုယျလုံးလေးလံထိုငျးမှိုငျးလာသလို၊ အလုပျသေးသေးလေးကအစ ပွီးဆုံးဖို့ အရမျးကွာမွငျ့နတောမြိုးပါ။
ကိုယျ့ကိုကိုယျဘာတနျဖိုးမှမရှိတော့ဘဲ အပွဈရှိနသေလို စိတျမလုံခွုံဖွဈနတောမြိုးပါ။ ဘဝမှာ ဖွဈခဲ့သမြှအမှားတှအေတှကျ ကိုယျ့မှာပဲ အပွဈရှိနသေလို ကွီးကွီးမားမား စိတျဖိဆီးလာတာမြိုးပါ။
ကိုယျ့လုပျရပျတှကေ ကြိုးကွောငျးဆီလြျောမှုမရှိဘဲ မိုကျရူးရဲဆနျလာခွငျး၊ အထူးသဖွငျ့ အန်တရာယျမြားတဲ့ ဂိမျးတှေ ကစားတာမြိုး၊ အရှိနျပွငျးပွငျး ကားမောငျးတာမြိုး၊ လောငျးကစားတဈခုခုကိုစှဲမွဲနအေောငျလောငျးတာမြိုးတှေ လုပျမိနတောကို ဆိုလိုတာပါ။
အာရုံစူးစိုကျမှုတှေ ဝဝေါးလာခွငျး၊ ဆုံးဖွတျခကျြခရြာမှာ မပွတျသားတော့ခွငျး၊ မှတျမိနိုငျစှမျးတှေ လြော့ကလြာခွငျးတှပေါ။
(၁၀) ဖျောပွလို့မရတဲ့ နာကငျြကိုကျခဲမှုတှေ
ခေါငျးကိုကျတာတှေ၊ ကြောအောငျ့တာတှေ၊ ကွှကျသားတှနောကငျြတာတှေ၊ အစာအိမျက အောငျ့လာနာလာတာမြိုးတှေ ပွငျးပွငျးထနျထနျဖွဈလာတာမြိုးတှပေါ။
HuaweiHUAWEI nova 2i အကွောငျး အသေးစိတျသိရှိရနျ
ဒီ ၁၀ ခကျြနဲ့ ကိုယျ့အခွအေနကေကိုကျညီနပွေီဆိုရငျတော့ ကိုယျ့မှာ စိတျကရြောဂါဝငျရောကျနပေါပွီ။ တဈစထကျတဈစပိုမိုဆိုးရှားမလာစဖေို့ စိတျကနျြးမာရေးဆရာဝနျတဈယောကျနဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျရငျဖှငျ့ပွီး ကုသမှုကို ထိထိရောကျရောကျခံယူသငျ့ပါတယျ။ ဘဝမှာ နပြေျောစမေယျ့ အကွောငျးအရာတှကေို စဉျးစားပွီး အကောငျးမွငျစိတျကို တဖွညျးဖွညျးပိုမိုမွှငျ့တငျသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှသာ စိတျရောကိုယျရောကနျြးမာတဲ့လူတဈယောကျအနနေဲ့ ဘဝမှာ ပြျောပြျောရှငျရှငျရှငျသနျသှားနိုငျမှာပါ။
မျက်တောင်လေးကို ကျော့ညွတ်ပြီး ဖြာထွက်စေမယ့် Mascara လေးများ
by redrose . 1 hour ago
မင်းသားမင်းသမီးမဖြစ်ခင်တည်းက တွဲခဲ့ဖူးကြတဲ့ နာမည်ကျော်များ
by Ei Ei .2hours ago
ညိုညစ်သွားတဲ့အသားအရေအတွက် အကောင်းဆုံး Treatment နဲ့ Spa များ
by Ju Jue .3hours ago
ပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်လိုရှာပြီး ဘယ်မှာသုံးလိုက်တာလဲ ဂျက်ဘီဇော့ (Jeff Bezos)
by Kyaw Soe Aung .4hours ago
ဝမ်းနည်းနေတဲ့ မျက်နှာလေးကြောင့် အင်တာနက်မှာရေပန်းစားနေတဲ့ Bulldog လေး
အောင်မြင်တဲ့ Career အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးအတွက် WEBS College of Business